घर फुटबल प्रबन्धक एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको डिसेम्बर 18, 2017
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वश्रेष्ठ उपनामद्वारा चिनिन्छ; 'फ्रर्जी'। हाम्रो एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्याङ्क तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता सम्म पुग्दछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। अब थप adieu बिना, सुरु हुन्छ।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: बाल्यकाल
सर अलेक्जेंडर चापामन फर्गुसन थियो ग्लासगो स्कटल्याण्डमा जन्मेका अलेक्जेंडर बीटटन फ्रर्गुसन (बुबा) र एलिजाबेथ हार्डी फ्रर्गुसन (आमा) द्वारा डिसेम्बर 31 को 1941st मा।
उनी उनको हजुरआमाको घरमा जन्मेको होल्डहोल्ड रोडमा गोवनमा जन्मे तर 667 गोभिन्द रोड (जसलाई पछि ध्वस्त भएको छ) मा एक पतनमा बढ्यो। बच्चाको रूपमा, उहाँ आफ्ना आमाबाबु र तिनका साना भाइ मार्टिनसँग बस्नुभयो। उनको शहर, गोविन स्कटल्याण्डका ग्लासगोमा एक कामदार वर्गको वरिपरि छ। फर्ग्यूसनको पिता सहितको शहरमा बस्ने सबैजना जहाज निर्माण व्यवसायमा उच्च हुने मौका थियो। सारमा, एक जहाज निर्माण समुदायमा एक बच्चाको रूपमा।
बढ्दै गयो, एलेक्सले बरूमलोन रोड प्राथमिक विद्यालयमा र पछि गोवन हाई स्कूलमा भाग लिनुभयो, र रङर्स फुटबल क्लबलाई समर्थन गर्दछ। तथापि, तिनका अन्य बच्चाहरु जस्तै यसको बारेमा केहि फरक थियो। उहाँ एक बुद्धिमान केटा हुनुहुन्थ्यो तर अध्ययनमा निकै चासो राख्नुहुन्थ्यो र फुटबल प्ले गर्न थप झुकाव थियो।
उनले आफ्नो साना भाई, मार्टिन र साथीसँग फुटबल बललाई कुटपिट घरहरू बीच गली नदीको माध्यमबाट ल्याइदिने मन पराएका थिए, र तिनका पिताका केही सहयोगले तिनले एक प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाको विकास गरे।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
फर्जी गरीब परिवारबाट आयो। उहाँ ग्याँस तर सुख्खा परिवार भएको थियो जुन ग्लासगोको गोविन्द जहाजखाना क्षेत्रमा जीवनको सुरुवात भयो। जहाज भवन क्षेत्रमा उनको पिताले कुनै पनि गंभीर हाइट्सको स्वरमा कहिल्यै स्नेह गरेन। उनले अस्तित्वको लागि शौकिया फुटबलको लागि बसोबास गरे जुन तिनलाई धेरै कम वेतन दिए।
तथापि यो एलेक्स फर्गसनको जन्ममा छ वर्षको उमेर थियो जुन अलेक्जेन्डर बिटटन फर्गुसनले शौकिया फुटबल खेलाडीबाट सेकेन्सर गरेकी थिइन्। धन्यवाद कि ग्लासगो जहाज निर्माण व्यवसायमा। उहाँ एक भित्र जानु भयो प्लटर सहायक । यो समय उहाँ भरोसा थियो र अब जवान Alex (तल), तिनका भाइ र आमालाई खाना खान सक्दिन।
दुर्भाग्यवश एलेक्स फर्गुसनको लागि, दुवै जना आमाबाबुले आफ्नो उमेर 67 भन्दा पहिले समान रोग (फेफड़ोंको क्यान्सर) बाट मृत्यु भएको थियो जुन ब्रिटिश जीवन प्रत्याशा उमेर भन्दा तल। तथापि, तिनीहरू दुवै भारी भोकरहरू थिए। एलेक्स फ्रर्गसनको पिता 66 मा 1979 उमेर मा फेफड़ों को क्यान्सर को मृत्यु भयो। Ferguson आमा आमा एलिजाबेथ पनि 64 मा 1986 उमेर मा फेफड़ों को क्यान्सर को मृत्यु भएको थियो। उनको मृत्यु भयो जब म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रबन्धक को रूपमा नियुक्त गरे तीन हफ्ते पछि। उनको असामान्य मृत्यु नयाँ प्रबन्धक साबर र महिनाको लागि ठूलो दुखाइमा छोड्नुभयो। यो उनको मैनचेस्टर युनाइटेड म्यानुअल क्यारियर को लागी उनको मुश्किल शुरुवात को कारण थियो। एक कारण किन उनले लगभग बेकार गरे। यो शोक र एक लामो अवधि थियो "विनाशकारी प्रभाव" आमाबाबु दुवै एउटै रोग (फेफड़ोंको क्यान्सर) लाई हराउन।
फर्गीले स्कटिश सरकारलाई लडाई र भागे 'क्यान्सर प्रारम्भिक पत्ता लगाउनुहोस्' अभियान जो £ 30million को राशि प्राप्त गर्यो। एलेक्स फर्गसनले अगाडिको अभियानको लागि सहमत भए किनभने आफ्नै हृदयघातको कारण र सन्देश प्राप्त गर्न कि प्रारम्भिक पहिचानले मानिसहरूलाई दिन सक्छ। "थप समय" आफ्नो परिवारसँग खर्च गर्न।
उसले भन्यो: "मलाई सम्झनु भनेको मेरो आमाबाबुले फेफड़ोंको क्यान्सर भएको थियो। म पनि सम्झनु भएको दिन सम्झन्छु कि मेरो आमाले मात्र जीवन बिताउन केहि दिन पर्थ्यो। म अस्पताल जान पर्यो र डाक्टर मलाई तल बस्नुभयो, मलाई फेफडाको क्यान्सर भन्नु भयो, त्यसपछि यसो भन्नुभयो: "उनी जिउँदो चार दिन लागेका छन्"। उहाँ सही थियो। तिनी चार दिन पछि मरे। उनको मृत्यु र समय मैले कहिल्यै देखेको स्मारक चीजहरु मध्ये एक थियो। तर चीजहरू अहिले फरक छन्। यी दिनहरु, फेफड़ों को क्यान्सर को मृत्यु को सजा नहीं हुनु पर्छ। यो प्रारम्भिक भेट्टाउन सक्छ तपाईंको जीवन बचाउन र तपाईंको परिवार संग खर्च गर्न अतिरिक्त समय दिन सक्छ। म यस अभियानमा संलग्न हुन चाहन्थेँ किनभने मैले मेरा आमाबाबु दुवैलाई लुटेको क्यान्सर हराएको छु। मलाई थाहा छ कि विनाशकारी प्रभाव कैंसर परिवारमा हुन सक्छ। त्यसो त यसको बारेमा केहि गरेनन, म कसैलाई आग्रह गर्दछु जसले चाँडै नै जाँच गर्न चिन्तित छ। "
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: परिवार र सम्बन्ध जीवन
एलेक्स फ्रर्गसन आफ्नो युवा उमेरको उमेरमा मचेस्टरको दक्षिणमा बस्नुभयो। यो यो शहरमा उनले आफ्नी श्रीमतीलाई क्याथी भेट्थे। तिनीहरू दुवै 1966 मा विवाहित छन्।
उनीहरूको विवाहले फलहरूसँग तुरुन्तै आशिष् पाएको थियो .मेरा पहिलो पुत्र मार्कले 1968 मा जन्मेको थियो। त्यो विवाहको दुई वर्षपछि छ।
तिनीहरूले अर्को हुन सक्नुअघि चार वर्षसम्म पर्खिरहेका थिए। 9th फेब्रुअरीमा, 1972, एलेक्स फ्रर्गस र पत्नी जेसन र डारेन नाउँ गरेको एक प्यारी जुडिनहरू थिए।
एलेक्स फर्गुसनलाई हेरचाह गर्ने पतिको रूपमा उनको पत्नी क्याथीले वर्णन गरेको छ। उनले उनलाई एक दिन देखि प्रेम गरेको थियो। उहाँ कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन घरमा महिलाहरूको भूमिका देख्न सक्दैनन्। उहाँले कहिलेकाहीँ भान्सा सहित प्रत्येक घरघरमा सहयोग गर्नुहुनेछ।
दुबै प्रेमीहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई खुसीमा देख्छन्। एलेक्स फ्रर्गसनको लागि, "परिवार महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यो सबै चीज हो। "
उनीहरूको विवाह ब्रिटेनमा सबैभन्दा सफलको रूपमा वर्णन गरिएको छ। धेरैले देखेका छन् कि अनुकरणको योग्य छ। तिनीहरूको मनाई वैवाहिक जीवनले 51 वर्ष भन्दा बढीको लागि काम गरिसकेको छ।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: छोराछोरीलाई दियो
एलेक्स फ्रर्गसनको सबैभन्दा जेठो छोरो मार्क पीटरब्रो युनाइटेडको पूर्व प्रबन्धक र पूर्व पेशेवर फुटबलर थिए।
डार्न नामक एक जुनी एक पटक एक पटक उनको बुबाको मैनचेस्टर युनाइटेडले एक्सएनएमएक्सए एक्सएनमक्सबाट खेल्नु भएको थियो। उहाँ अहिले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ Doncaster Rovers लेखनको समयमा।
अर्को जुत्ता, जेसन फ्रर्गुसन भनिन्छ एक फुटबल एजेन्सी 'एलाइट खेल'जो एक पल्ट उनको बुबा को क्लब को प्रबंधन को समयमा मैनचेस्टर युनाइटेड संग साझेदारी मा थियो। उहाँले घटनाक्रम व्यवस्थापन कम्पनी पनि चलाउनुहुन्छ।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: डेविड बेखमसँग मुद्दा
यो स्पष्ट छ कि फर्ग्यूसनले डेभिड बेकमलाई आफ्नो मुख्य अफसोस को एक मानिन्छ। उनले बेकमलाई माया गर्थे। उनले उहाँलाई एक छोराको रूपमा सोचे र उनले आफ्नो फुटबलिंग सपनाको पीडा गर्ने बाटोको लागि प्रशंसा गरेनन्; आफ्नो सहनशीलताको लागि, सहनशीलता र मानिसहरूलाई साबित गर्न चाहानुहुन्छ। तर फर्गुसनलाई विश्वास गर्न आए कि बेखमले उनलाई कुन कुरालाई तारा बनाएको थियो र बिस्तारै, पिचमा कडा परिश्रम गर्न कोसिस गरे।
2003 मा, फेर्गससन संयुक्त खेलाडी डेविड बेखमसँग ड्रेसिङ कोठा तर्कमा संलग्न भएको थियो। उनले बेखमलाई पुरानो ट्रेफर्डमा आर्सेल्यान्डल लक्ष्यमा फर्कन असफल पारे। फर्गुसले कथित रूपमा फुटबल बूटलाई चोरी दिए, जसले अनुहारमा खेलाडीलाई हरायो र बेखममा चोट लागेको थियो।
डेभीड बेकहमले केहि गरे। उनले घाँटीलाई फोटो दिन र साक्षात्कार दिन अनुमति दिए। उनको काम देख्न पछि, फर्गासोनले बेचेको निर्णय गरे। उनले विश्वास गरे कि बेकमले महसुस गरे कि उनी उनको भन्दा र क्लब भन्दा ठूलो भए।
फर्गुसनले एक पटक लेखे कि बेखमले उनको अनुहारको चोटले उनलाई एक सेलिब्रेटीमा परिणत गर्यो। उसको अनुसार 'चोट लाग्यो पछि क्षेत्र बाट प्रसिद्धि को पछि उनको सजग निर्णय थियो।
उनी पनि लेख्छन् कि त्यहाँ कुनै थिएन "फुटबलिंग कारण" बेकिमको लागि लस एंजेल्समा जानुहोस्। 'उनी युनाइटेडको सबैभन्दा सत्त्वनात्मक किंवदन्ती बन्ने मौका गुमाए।' फ्रर्गुसन भन्छन्।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: Roy Keane को साथ मुद्दा
सर एलेक्स फर्गुसनले रोय केनको चित्रलाई चित्रण गर्छन्, उनको पूर्व कप्तान र तालवान, एक अज्ञात र भयानक व्यक्तिको रूपमा, उसलाई समेत डरलाग्दो र निश्चित रूपमा, ड्रेसिंग रूम भित्र धेरै खेलाडीहरू सक्षम छन्। केईनले लोहेको मुट्ठी र एक ज्वलन्त भाषामा शासन गरे, जो फर्ग्यूसनले आफ्नो शरीरको सबै भन्दा ठूलो भाग थियो.
उनीहरूको पतन बाहिर पुरानो ट्रेफर्ड लोकगीत र फर्गुसनको अंश बन्यो जसले यो केनको मैदान-क्षेत्रमा गिरावट र नतिजालाई तिनले परिणामको रूपमा महसुस गर्यो।
केनलाई मन्चेस्टर युनाइटेड प्रशिक्षण मैदानमा प्री-सिजन सुविधाहरू सुविधाजनक नभएको कुराको बारेमा रिस उठेको थियो। उनले एमयूटीभीलाई कुख्यात अन्तर्वार्ता दिए जुन उनले फर्ग्युसन र उनको टोलीका धेरै साथीहरु किरन रिचर्डसन, डरेन फ्लेचर, एलन स्मिथ, एडविन भान डेर सार र रियो फर्डिनान्ड जस्ता आलोचना गरे।
केनले सुझाव दिए कि स्क्वाडले साक्षात्कार हेर्दै उनीहरूलाई आफ्नै दिमागी बनाउन र पछि लागेकाले उनीहरूको र धेरै खेलाडीहरू, फर्गुसनको साथ एक बीचको क्रूर टकराव थियो। उसले कार्यान्वयन गरेको थियो र तिनले केनको सम्झौताको भुक्तानी र केल्टिकमा उनको प्रस्थान तुरुन्तै स्वीकृत गरे।
फर्गुसनले लेखेकी थिईन उनीहरूलाई माफी माग्न पप गरेकी थिईन् तर रिसेप्टरले पछिल्ला सार्वजनिक टिप्पणीको पछि बदसूरत भए।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: रुउडसँग मुद्दा
एलेक्स फर्गुसनले एकपटक रुउडसँग एक मुद्दा राखेका थिए जसले उनीहरूको दाबी गरेकी थिइन्। तिनीहरूको संघर्षले रोउड वान निस्टेलोरोयले एक्सएनएनएक्सक्समा अचम्मको परिस्थितिमा मैनचेस्टर युनाइटेडलाई छोडेनन्। उनको समस्या सुरु भयो जब रूउड खुलेका स्वामी र क्यान्सर कप फाइनलमा विगनको बिरोध पछि उनको शाप पछि उनको शाप राख्यो।
फर्गुसनले उनीहरूलाई रियल म्याड्रिडलाई फर्काउने प्रत्याशित गरेनन् तर उनको व्यवहारले उनीहरूको हातमा जबरजस्ती गरे। तथापि, व्यान नस्टेल्रोयले जनवरी 2010 मा नीलो रंगबाट फ्रर्गसोनलाई फोन कललाई आफ्नो व्यवहारको लागि माफी माग्नको लागि आग्रह गर्यो।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: ऋण खेलाडीहरू सम्झाउँदै
तिनको जुत्ता पुर्खा डार्रेन फ्रर्गुसनको बेवास्ता पछि प्रेस्टन उत्तरी अन्त्य, फर्गुसनले क्रोधमा तुरुन्तै नयाँ प्रबन्धकीय प्रणाली अन्तर्गत प्रेस्टनबाट ऋण लिने खेलाडीहरु रच्ची डे लात, यहोशु राजा र मटिटी जेम्सलाई सम्झन थाले। उनले पछि बताए कि यो खेलाडीको परिवर्तन पछि प्रिस्टनमा फर्केर फर्किने खेलाडीहरूको आफ्नै अनुरोध थियो। स्टक सिटी प्रबन्धक टोनी पल्स प्रेस्टनका दुई पूर्व म्यानचेस्टर युनाइटेड खेलाडीलाई सम्झाउँदै पनि पछि लागेपछि उनले खेलाडीलाई आफ्नो टोलीको गहन तालिकाको पूरै पूरा गर्न बताइन्।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: एक पटक अनुमति दिइयो गेटेथ बुलेट स्लिप गर्न
सर एलेक्स फर्गुसन सामान्यतया कहिलेकाहीँका बारे चिन्ता गर्दछन् तर पूर्व मैनचेस्टर संयुक्त प्रबन्धकको बारेमा अपवाद Gareth गठरी, स्वीकार गरे कि उनको खेलाडी मा बाहिर छ।
मैनचेस्टर युनाइटेड स्काउट्सबाट रिपोर्टले संकेत गर्यो कि बेलीले बायाँ पैडको खेलाडीको लागि फर्ग्यूसनको माग पूरा गर्दछ जसले रयान गिग्सलाई बदल्न सक्छ। फर्गुसन आफैले स्केआउटको लागि अनुरोध गरे कि बेली अगाडी उसलाई ल्याउन। तथापि त्यहाँ केही चीज थियो जुन स्थानान्तरण तोडिएको छ। आक्रोश देख्नुभएपछि एलेक्स फ्रर्गसन उनी निकै छोटो थिए।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: सारांशमा प्रबन्धकीय क्यारियर
32-वर्ष-उमेर फ्रर्गुसले 1974 मा पूर्वी स्टर्लिङहायरमा आफ्नो प्रबन्धक क्यारियर सुरू गरे, आफ्नो उज्यालो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृतिसँग तत्काल प्रभाव पार्दै। उनी केही महिना पछि सेन्ट मिरेनमा गए र 1977 मा स्कटिश पहिलो डिस्प्ले च्याम्पियनशिप को संतहरु को नेतृत्व गरे पछि उनको अनुबंध को उल्लंघन को लागि एक वर्ष पछि निकाल दिए।
यो एबरडेन संग थियो कि फ्रर्गसन ले आफ्नो प्रतिष्ठा एक शीर्ष-उडान प्रबंधक को रूप मा दिए। केल्टिक-रेंजर्स च्याम्पियनशिप अङ्ग्रेजीमा ब्रेक गर्दा, फ्रर्गुसनले एबर्डडेनलाई स्कटिश प्रिमियर लिग तीनवटा खिताब, चार स्कस्कर कप, एक लीग कप, एक सुपर कप र एक युरोपेली कप विजेता कपको आठौं ऋतुहरूमा।
एलेक्स फर्गुसन नोभेम्बर 1986 मा प्रसिद्ध, तर मैनचेस्टर संयुक्त क्लबको नामको प्रमुखको रूपमा लिईयो। 1989-90 सीजनको शुरुवात कुनै न कुनै खिचडी पछि उनको काम कथित तौर पर लाइन मा थियो। उनको आमाको मृत्युको परिणामस्वरूप उनको खराब सुरुवात क्यामेरा। उनले लामो समय बिताएपछि उनको आमालाई लुंगुरको क्यान्सरको मृत्यु भएको बताईयो जसको प्रायः उनको नौकरीको खर्च हुन्छ। सौभाग्य देखि उनको लागि, रातो शैतानहरु एक रिकवरी देख्यो र उनको शुरुवात जादू को समयमा एफए कप जीतयो। उनले उसलाई आफ्नो कामको साथ राखे। सफलताका एक string पछि र बाकी तिनीहरू भन्छन् कि इतिहास हो।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: उनको विरासत
स्कर्सेली मूर्तिकला द्वारा डिजाइन गरिएको फ्रर्गुसनको कांस्य प्रतिमा फिलिप जैक्सन, 23 नोभेम्बर 2012 मा ओल्ड ट्रेफर्ड को बाहिर को अनावरण गरिएको थियो।
14 अक्टोबर 2013 मा, फर्गुसनले एक समारोहमा भाग लिनुभयो जहाँ पुरानो ट्रेफर्ड नजिकैको सडक पानीको पहुँच लाई सर एलेक्स फर्गुसन मार्ग।
Moreso, वाक्यांश "स्क्वायर-ब्याम टाइम" लीग प्रतियोगिताको लामो अन्तिम चरणको सन्दर्भमा फर्ग्यूसन द्वारा सम्बद्ध गरिएको छ कोलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश र अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश.
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: प्रजनन प्रबन्धकहरू
फर्गुसनका धेरै खेलाडिहरु आफु फुटबल प्रबन्धक बनेका छन्, टोनी फिट्टेपिक्रिक, एलेक्स मैकलिश, गर्डन स्ट्राक्चन, मार्क म्याकगे, विल मिलर, नेले कूपर, ब्रायन गन्न्न्न्, एरिक ब्ल्याक, ब्रायन रोब्सन, स्टीव ब्रूस, मार्क ह्यूजेस, रोई केई , पल इन्स, क्रिस कैपर, डरेन फ्रर्गुसन, ओले गन्नु सोल्जर्जर, हेनिंग बर्ग र गैरी नेभिले।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: राजनीति
उनी फुटबलको खेलमा उनको योगदानको लागि 1999 मा ब्रिटिश छठे हातबाट पराजित भएको थियो। 1998 मा, फर्गुसन को सबै भन्दा ठूलो निजी वित्तीय दाताहरुलाई एक सूची मा नामित गरियो श्रम पार्टी. उहाँ एक स्व-वर्णित समाजवादी हुनुहुन्छ र एक आजीवन श्रम समर्थक। जनवरी 2011 मा ग्राहम स्ट्रिंगर, मा एक श्रम सांसद म्यान्चेस्टर र मैनचेस्टर संयुक्त समर्थक, फर्गुसन को लागि बुलाया छ जीवन साथी। यदि यो भयो भने, यो फर्काउन पहिलो फर्केर वा पूर्व फुटबलर वा फुटबल प्रबन्धक फ्रर्गसन बनाउनेछ लार्ड हाउस। स्ट्रिंगर र सँगी मैनचेस्टर श्रम सांसद पॉल गोगिन्स फर्ग्यूसनले मई एक्सएनएनएक्समा आफ्नो सेवानिवृत्तिको घोषणा गरे पछि यो कल दोहोर्यायो। यद्यपि, अज्ञात स्रोतहरू दैनिक दर्पण अखबारले 1 अगस्त 2013 मा दावी गरेको छ कि फ्रर्गुसले स्वीकार गरेको थियो।
महिनामा 2014 स्कटिश आजादी सन्दर्भ, Ferguson एक vocal समर्थक र मजाक थियो अझ राम्रो सँगै अभियान जसले स्कटल्याण्डलाई समर्थन गर्यो यूनाइटेड किंगडमको एक भाग बाँकी छ। तिनले आलोचना गरे स्कटिश नेशनल पार्टीर यसको नेता एलेक्स सलाम, स्कटल्याण्ड बाहिर रहन स्कट्स बहिष्कार गर्ने निर्णयको लागि, तर युनाइटेड किंग्डमको बाकि भित्र रेफरलममा मतदान बाट।
एलेक्स फ्रर्गसन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: शिक्षा
2009 मा, फर्गुसनले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनमा मानद डट कम प्राप्त गरे मैनचेस्टर मेट्रोलिटन विश्वविद्यालय.
1998 मा मानद स्वामीहरू प्राप्त गरेपछि उनी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त दोस्रो श्रेणी थियो।